ဘယ်လိုနေရာတိုင်းလိုအပျသောအထူးကု၏မြောက်ဘက်တွင်အိမ်ယာ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူမြောက်ဘက်တွင်အလုပ်ရှာတွေ့မှ။ အလုံအလောက်ကျွမ်းကျင်သူများကရိုးရှင်းစွာမရှိပါ။ ဒါကြောင့်လုံးဝပြဿနာများမြောက်ဘက်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှင့်အိုးအိမ်ကိုရှာပါ။ အဘယ်အရာကို ...
ဒါဟာစောင့်ကြည့်ဖို့မော်စကိုသှားဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အဘယ်သူသည်သှားသလော မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်? အမျိုးသမီးအများစုအခွင့်အလမ်းများရှာသည်။ ငါဘယ်လာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသည်။ အဆိုပါလစာလည်းမြင့်မားတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းကိုရှာတော့တယ်။ မော်စကိုကနေတစ်ဦးကခေါ်ဆိုခ ...
ဒါဟာဘာမန်နေဂျာဟုတ်ကဲ့လုပ်နေတယ်! ဒါဟာသူပေးသောအဖြေကိုတူ: အိုင်တီ-မန်နေဂျာ 1323 အိုင်တီ-မန်နေဂျာအိုင်တီ-ဌာန (Information Technology သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ) ၏ဦးခေါင်းသည်ယင်း၏ function ကိုဒီဌာနကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်တီ-ဌာနအားလုံးနှင့်အတူဆကျဆံ ...
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကဘာလုပ်သလဲ။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်သူ၏ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ပစ္စည်းများ (သူအလုပ်လုပ်သည့်အတွက်) သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချမည့် ၀ ယ်သူများသို့မဟုတ်စျေးဆိုင်များကိုရှာသည်။ လစာသည်များသောအားဖြင့်ငွေပေးငွေယူ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
စာတိုက်မှအလုပ်အကိုင်အတွက်စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းသည်စာရွက်ပေါ်တွင် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု၊ စာတတ်မြောက်မှု) နှင့်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗဟုသုတတို့၏စမ်းသပ်မှုတို့ဖြစ်သည်။
ဘာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? အဘယ်အရာကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနေသော်လည်း။ စက်မှုလုပ်ငန်း, t ကို။ ရန်မဖြစ်ပါ။ ဒါဟာမိန်းကလေးတွေအထူးသဖြင့်နားလည်မထားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဝယ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအတွက်ဝယ်ယူရာတွင်ပါဝင်နေ ...
Daisy အက်ဖ် IO ____________ အဖြစ်နှစ်ပေါင်း _________ နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကုန်စုံဌာန prodovtsa LLC ရန်တုန့်ပြန်ရေးသားဖို့ဘယ်လောက်။ ကုမ္ပဏီ၌သူ၏အချိန်အတောအတွင်းတစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်စည်းကမ်း, သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ် ...
ထို့နောက်ရာရာခိုင်နှုန်းအလုပ်တစ်ခုရနိုင်လိမ့်မယ်အရာ, သင်ယူဖို့အဘယ်သူကိုငါနှစ်ပေါင်း 40 ။ ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းသည်လူ။ 100% nafig ဂျလေ့လာမှု။ အထူးကုအာမခံပေါ်ကြော်ငြာကိုသွား ...
သင်အထူးပြုချင်လျှင်အဘယ်သူသည်တံခါးစောင့်, သန့်စင်, storeman, ရောင်းချသူအထဲမှာစီးပွားရေးပညာရေးအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် ... ဒါပေါ်မှာ။ ဃနိုင်မလဲ? ကြည့်ပါ ကြော်ငြာများကိုဖတ်ပါ, အလုပ်သမားလဲလှယ်မှာ register, ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ, အထံမှအကူအညီတောင်း ...
သင်တန်းပြီးနောက်လက်မှတ်သို့မဟုတ်လက်မှတ်ပေးလျှင်, ခြားနားချက်ကဘာလဲ, ပိုကောင်းတဲ့အရာ? မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတွင်မဆိုပါဝင်ရန်အတွက်လက်မှတ် DAT Law ။ လက်မှတ် - အရည်အချင်းအဆင့်၊ အသိပညာပမာဏအချို့ကိုအတည်ပြုသည်။ (ငါထင်တယ်)
လူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းဂျော့ဘ်။ အဆိုပါပြတိုက်အလုပ်မဆိုအမှု၌ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်, ယူနှင့်ပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲမည်သူမဆိုရှာဖွေနေသင်တန်း။ ဟုတ်ကဲ့, သင်၏တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံ ...
အဘယ်အရာကိုမတိုင်ပင်ဘယျကုမ္ပဏီများမှတိုင်ပင်သလဲ? အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်တစ်ခုလုံးအသစ်သောလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပရိုဖိုင်းကိုတိုင်ပင်အလုံအလောက်ကျယ်ပြန့်သည်, သူတို့ကုမ္ပဏီများကတိုင်ပင်ဘူးသောအရာကိုခွဲခြားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ နှင့်ကွဲပြားခြားနားရှိပါတယ် ...
အိမ်ရှင်မတွေကဘယ်သူတွေလဲ ဒီအလုပ်အကိုင်ကဘာလဲ? မင်္ဂလာပါ ကျနော်တို့တောင်ကိုရီးယား (အိမ်ရှင်မအလုပ်အကိုင်များ) တွင်အလုပ်လုပ်ရန်မိန်းကလေးငယ်များစုဆောင်း။ လုံခြုံရေးအာမခံချက်။2လမှစာချုပ်။ Perelt နှင့်များအတွက်နေရာထိုင်ခင်း ...
ဘာ TCI controller ကိုပုံမှန်လည်ပတ်ထိန်းချုပ်ထား။ ကျနော်တို့ TCI ပျင်းမပါ))) ... Nascht အပြစ်တွေ, esch ဆင်းရဲချို့တဲ့ဆုကြေးငွေလျှော့ချနိုင်သည့်, ဘာမှပြောပါပေမယ့်လစာအနုတ်ကမ္ဘာ့ဖလားမဆိုပါဘူး ...
အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကဘာလဲ? ဘာအတွက်လဲ အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်သည်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီးပါတီများ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်အလုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကာလအတွင်းသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းညှိသည်။
မည်သူမဆိုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီလော စာအိတ် gluing ဥပမာ, etc, etc, အမှိုက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုထိုသို့ပေးဆောင်သို့မဟုတ်မ။ ဤရွေ့ကားစာအိတ်ရောင်းလာ, ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မည်မှ ...
အလုပ်အကိုင် pozhalusta နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများပေးပါ။ အရေးပေါ်။ တတ်နိုင်သမျှအသစ်ကနမူနာပါ။ ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ltd. , Daisy အက်ဖ် IO အနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်အဖြစ် _________ နှစ်ပေါင်းအတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရှိသူ၏အချိန်အတောအတွင်း ...
ယောဘသည်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ငါတတ်နိုင်သမျှထက်ကကူညီတဲ့အလုပ်လက်ပတ်နာရီရရှိရန်နီးပါးအပူတပြင်းသူသည်လူတိုင်းသုံးသပ်ပြီးသူတစ်ဦးလက်ပတ်နာရီ 11 နှစ်ပေါင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့, အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာများကိုတိုက်ရိုက် rabotodateley.Pishite ဖုန်းများအများကြီးအလုပ်လုပ်သူမိတ်ဆွေများကအများကြီးကျန်ရစ်: [အီးမေးလျ protected]...
“ အသိပညာ 1C” ဆိုတာဘာကိုငှားရမ်းတာလဲ။
“ အသိပညာ 1C” ဆိုတာဘာကိုငှားရမ်းတာလဲ။ စာရင်းကိုင်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ကို။ 1Сစာရင်းကိုင်သည်သင်စာရင်းအင်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည့် universal program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သမိုင်းရှည်လျားပြီး ...
အဘယ်အရာစာအုပ်ပုံနှိပ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်စာချုပ်အောက်တွင်အလုပ်ခွဲခြား? 56466 အလုပ်အကိုင်စာချုပ်လိုအပ်သောနှင့်အလုပ်စာအုပ်တစ်ခု entry ကို, ဒါကြောင့်ဘာမှထပ်, ဒါပေမယ့်တစ်အရပ်ဘက်စာချုပ်၌တည်ရှိ၏ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,477 စက္ကန့်ကျော် Generate ။